सिके राउत लाई रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश-NepalKanoon.com
सिके राउत लाई रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश
राज्यद्रोहको आरोपमा सार्वजानिक मुद्दा खेपिरहेका डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके) लाई रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय मोहनरमण भट्टराई र भुपेन्द्रप्रसाद राईको असोज २८ गतेको संयुक्त इजलासले राउतसँग पचाँस हजार रुपिया धरौटी लिई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
जन्मकैदको माग गर्दै असोज २२ गते विशेष अदालतमा राउतविरुद्ध राज्यविप्लवको मुद्दा दायर भएको थियो । मोरङको सोराभाग गाविस- ३, रंगेलीमा सर्वसाधारणलाई भेला गरी डर त्रास फैलाई आतंकित बनाई सामाजिक सद्भाव भड्काएको र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने काम गरेको राउतमाथि आरोप लागेको थियो ।
साथै राउतले मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र सोही व्यहोरोको लेख रचना तथा किताब छपाई मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्‍याउने काम गरेको आरोप रहेको थियो । तर अदालती बयानमा आफूले मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति नदिएको डा. राउतले बताएका थिए ।